News - Fududee horumarka cilmiga iyo teknolojiyada ee Golaha Ganacsiga Xorta ah ee Haikou ee Dhiirrigelinta Ganacsiga Caalamiga ah wuxuu kobciyaa iskaashiga qotada dheer ee ka dhexeeya shirkadaha Hainan iyo kuwa caalamiga ah
Fududeynta horumarinta cilmiga iyo teknolojiyada ee Golaha Ganacsiga Xorta ah ee Haikou ee Dhiirrigalinta Ganacsiga Caalamiga ah waxay sare uqaadeysaa iskaashiga qotada dheer ee ka dhexeeya shirkadaha Hainan iyo kuwa caalamiga ah
Iyada oo gacan ka heleysa Golaha Haikou ee Dhiirrigelinta Ganacsiga Caalamiga ah, Hainan Huayan Collagen Technology Co., Ltd. ayaa galabnimadii Noofambar 20 la saxiixday heshiis qaab-dhismeed ay wada leeyihiin Machadka Danmark ee Bio-X iyo Lyngby Scientific, si loo dhiso iskaashi istiraatiiji ah.
Waxaa la fahamsan yahay in saxiixa heshiiska labada dhinac uu muujinayo in Hainan Huayan ay si firfircoon u soo bandhigi doonto tikniyoolajiyadda casriga ah ee biomedical iyada oo loo marayo dhismaha dekedda ganacsiga xorta ah, waxayna sidoo kale calaamad u tahay horumarka rasmiga ah ee Hainan ee dhinacyada caafimaadka ee loo yaqaan 'collagen peptides'.
Hainan Huayan Collagen Technology Co., Ltd. waa shirkad tiknoolajiyad sare oo qaran ah oo isku dhafan horumarinta wax soo saarka, wax soo saarka iyo iibka. Sidoo kale waa shirkaddii ugu horreysay ee Shiinaha ka hawl gasha cilmi-baarista iyo soo-saarka iyo soo-saarista peptides-ka kalluun ee kalluunka leh. In kabadan 80% alaabteeda waxaa loo dhoofiyaa Koonfur Bari Aasiya iyo suuqa Ameerika. Machadka deenishka ee Bio-X waa shirkad adeeg teknoolojiyadeed ku shaqaysa oo xarunteedu tahay Danmark, isla markaana leh aqoonyahanno adduunka caan ka ah iyo kaydad caafimaad oo badan oo ah kuwa loo yaqaan 'collagen polypeptide research and development technology'.
Isla mar ahaantaana, Guo Hongxing, maareeyaha guud ee Hainan Huayan Collagen Technology Co., Ltd., ayaa sheegay in saxiixaani uu ku durayo taageero farsamo oo xoog leh shirkadda si loo horumariyo tayada iyo waxtarka. Waxaan ka faa'iideysan doonnaa faa'iidooyinka siyaasadeed ee Hainan Free Trade Port si aan u fulino soo iibsiga caalamiga ah ee alaabta ceyriinka ah iyo qaab ballaadhan oo suuqyada macaamiisha adduunka ah, waxaanan ku dadaalaynaa in aan dhisno dhul teknolojiyadeed oo ku habboon berriga peptides bayoolojiga badda ee dekedda ganacsiga xorta ah .